Tezitra noho ny famonoana mpanao gazety ireo bilaogera Libaney · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Novambra 2018 6:46 GMT
(Asa kanto, Lohataona Beirota)
Avy hatrany dia naneho ny hatezerany sy ny fahavinirany ireo bilaogera Libaney:
Rampurple manazava ny dikan'i Gebran Tueni ho azy:
Gebran Tueni no olona nanome fanantenana ho ahy tamin'ny alàlan'ny lahatsorany, tamin'ny alàlan'ny fanadihadiana nataony ary tamin'ny lahateniny. Tsy nitarika antoko politika izy, tiany ny tanora Libaney mba hivoaka ny rafitra politika Libaney fahiny ary hisaina ny azy ireo manokana. Tsy tiany ny tanora Libaney hanara-dia ireo lehiben'ady fa mba hiray saina … tahaka ny nataon'izy ireo tamin'ny 14 Martsa, ny kristiana, ny silamo, ary i Druze samy niray saina ho an'i Libanona.
Lebanon.Profile ao amin'ny Libanese Political Journal manoratra ny mombamomba fohy an'io lehilahy io ary mieritreritra fa fantany ny antony namonoana azy androany:
Tsy dia mahagaga loatra ny fikendrena an'i Tueni. Na izany aza, misarika ny saina ny fotoana nanaovana ny fanafihana. Vao avy namoaka ny tatitra-ny momba ny famonoana ny Praiminisitra teo aloha Rafiq al Hariri ny Vaomieran'ny Firenena Mikambana. Hivoaka ampahibemaso tsy ho ela ny tatitra:
Samy tezitra i Raja sy i Doha avy amin'ny The Lebanese Bloggers. Raja miantso hoe: “Syriana ratsy fanahy! Syriana voaozona !!!! Tsy fantatr'izy ireo ny manao zavatra hafa.” Somary malefaka kosa i Doha:
Zanak'ondry iray hafa novonoina teo anoloan'ny alitaran'ny lalana mihoso-drà ao Libanona mankany amin'ny fahafahana sy ny fivoahana amin'ny fanandevozana. Nandao antsika ny iray hafa, maritiora iray hafa, karazana ranomaso sy alahelo hafa.
Desmond avy ao amin'ny A View From A Bar Stool In Beirut mamehy amin'alahelo hoe:
Tahaka ny hoe mahatsapa ireo mpanafika fa tsy very na inona na inona ry zareo fa manonona loza ho an'i Libanona fotsiny